Tag: best time infographic | Martech Zone
Tag: best time infographic
Konke Oyoze Udinge Ukwazi “Ngezikhathi Ezinhle Kakhulu”
NgeSonto, ngoJuni 28, i-2015 NgeSonto, ngoJuni 28, i-2015 Douglas Karr
Uma ngingalokothi ngihlanganyele esinye isikhathi esihle kakhulu se-infographic, ngizojabula ngokuthi lesi yisokugcina. Futhi ngithemba impela ukuthi nawe wabelana ngakho. Ngibubula ngokuphelele njalo lapho ngibona isikhathi esihle kakhulu se-infographic. Isikhathi esihle sokuTwitter. Isikhathi esihle sokuvuselela ku-Facebook. Isikhathi esihle sokuthumela i-imeyili. Isikhathi esihle sokuvuselela i-LinkedIn. Isikhathi esihle sokubhuloga. Argh… kungihlanyisa ngempela. Noma nini lapho othile ehlanganyela eyodwa